ဥရောပ ထိပ်သီးလိဂ်5ခုမှာ ဘယ်သူလို့ ပင်နယ်တီ အများဆုံး ကန်ခွင့်ရထားတာလဲ? - SPORTS MYANMAR
ဥရောပ ထိပ်သီးလိဂ်5ခုမှာ ဘယ်သူလို့ ပင်နယ်တီ အများဆုံး ကန်ခွင့်ရထားတာလဲ?
ပင်နယ်တီ ဟာ လောလောဆယ်မှာ မက်ဒရစ် နဲ့ မန်ချက်စတာ ကို ကူးချီသန်းချီ လုပ်နေသလား မေးယူရလောက်အောင် အဲဒီမြို့က ထိပ်သီး အသင်းကြီးနှစ်ကလဲ ကန်သွင်းခွင့်တွေ ဆက်တိုက် ရရှိလျှက် ရှိနေပါတယ်။
သို့သော် မနေ့ညက ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့တဲ့ အက်စ်တွန်ဗီလာ အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ပင်နယ်တီ ကတော့ တော်တော်လေးကို ဝေဖန်ချင်စရာ ကောင်းသလို ၊ VAR အသုံးပြုထားတဲ့ အကြားက ဆန့်ကျင်ဘက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကို ချမှတ်သွားတာက တန်းဆင်းဇုံ တိုက်ပွဲအတွက် ဆင်နွှဲနေတဲ့ အက်စ်တွန် ဗီလာ အတွက် အရမ်းကို နစ်နာစေခဲ့ပါတယ်။
VAR ဟာ ဒီတစ်ခုတည်းပဲ အမှားလုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆောက်သမ်တန် နဲ့ အဲဗာတန် တို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာလဲ ဝက်ပရောက် ရဲ့ ပင်နယ်တီဟာ လုံး၀ မဖြစ်သင့်ခဲ့သလို ၊ ဘုန်းမောက် – စပါး တို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာတော့ ဟယ်ရယ်ကိန်း အတွက် ပင်နယ်တီ က သေချာပေါက် ကို သတ်မှတ်ပေးရမှာပါ။
ဒီလို တစ်ညထဲမှာပဲ ဆက်တိုက် အမှားတွေ များလွန်းတာတော့ ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ အရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေသလို ၊ ပုံရိပ်တွေလဲ အများကြီး ထိခိုက်လွန်းပါတယ်။
နည်းပညာတွေ အသုံးပြုတယ် ဆိုတာ လူတွေ ရဲ့ အမှားတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချပစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားကြပေမယ့် ၊ ဒိုင်လူကြီးတွေ ရဲ့ လွဲမှားတဲ့ အသုံးပြုပုံတွေကြောင့် မဖြစ်သင့်တဲ့ အမှားမျိုးတွေ မြင်ရတာ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ။
ဆိုးရှား ရဲ့ ယူနိုက်တက် ကတော့ ဒီရာသီ ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းခွင့် 13 ကြိမ် အထိ ရရှိသွားပြီ ဖြစ်လို့ ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် တစ်ရာသီ အတွင်း ကန်သွင်းမှု အကြိမ်ရေ အများဆုံး ရယူထားတဲ့ လက်စတာ ၊ ပဲလေ့ တို့ရဲ့ စံချိန်တွေနဲ့ တူညီ သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်ကျန် ပွဲစဉ်တွေ ကစားဖို့ ရှိနေသေးတာကြောင့် ၊ ယူနိုက်တက်ဟာ ပင်နယ်တီ အများဆုံး ကန်သွင်းခွင့်ရတဲ့ စံချိန်တင် မှတ်တမ်းကိုပါ တင်ရှိသွားဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိ အချိန်ထိတော့ သူတို့ဟာ2နှစ် ဆက်တိုက် ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းမှု အများဆုံး အသင်းအဖြစ် ရပ်တည်ဖို့ အတွက် အခြေအနေကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်လျှက် ရှိနေပါတယ်။ 2018-2019 ဘောလုံးရာသီ နောက်ပိုင်း သူတို့ စုစုပေါင်း ကန်သွင်းခွင့် ရထားတဲ့ ပင်နယ်တီ အရေအတွက်ဟာ စုစုပေါင်း 25 ကြိမ် အထိ ရှိပါတယ်။
လာလီဂါ မှာတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်းကို ဒိုင်ကူနေတယ် ဆိုပြီး ပြိုင်ဘက် ဘာစီလိုနာ ပရိသတ်တွေက အပြင်းအထန် စွပ်စွဲလျှက် ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ နှစ်ပွဲ စလုံးမှာ ပင်နယ်တီ သွင်းဂိုးတွေ နဲ့ ကပ် အနိုင်ရခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အခုလို စွပ်စွဲတဲ့ အသံတွေ ကျယ်လောာင် လာခဲ့တာပါ။
သို့သော် ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းခွင့် မှတ်တမ်းတွေ မှာတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ်ဟာ အကြိမ် အများဆုံး ရတဲ့ ကလပ် အသင်း မဟုတ်တဲ့ အပြင် ၊ သူ့ထက် အရေအတွက် များ အသင်းက3သင်း အထိတောင် ရှိလို့နေပါတယ်။ အဲဒီ အသင်းတွေ က ဗီလာရီးရဲ (11 ကြိမ်) ၊ မာယော့ကာ (10 ကြိမ်) ၊ အေတီ ကို 10 ကြိမ် တို့ ဖြစ်ပြီး ၊ ရီးရဲ မက်ဒရစ် က9ကြိမ် သာ ကန်သွင်းခွင့် ရထားတာပါ။
မဟာပြိုင်ဘက်ကြီး ဘာစီလိုနာ ကတော့6ကြိမ်ပဲ ရထားပါသေးတယ်။
ပြင်သစ် လီဂူးဝမ်း မှာ တော့ လိုင်လီ နဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းတွေဟာ စုစုပေါင်း ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းခွင့် 8 ကြိမ် စီ နဲ့ ထိပ်ဆုံးကနေ ရပ်တည်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ နောက်မှာ မာဆေး ၊ တူးလောက် ၊ လီယွန် အသင်းတွေက စုစုပေါင်း6စီ နဲ့ ကပ်လျှက် ရပ်တည်နေပါတယ်။
ပင်နယ်တီ မှတ်တမ်းတွေ ကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ဘွန်ဒက်လီဂါ နဲ့ ပြင်သစ် လီဂူးဝမ်း ဟာ ပင်နယ်တီ ပေးတာ အနည်းဆုံး လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေ အဖြစ် ရပ်တည်လို့ နေပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲ နှစ်ခုစလုံးဟာ ဒီရာသီမှာ ပြီးစီးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သလို ၊ ပင်နယ်တီ အများဆုံး ကန်သွင်းခွင့် ရခဲ့တဲ့ အသင်းတွေဟာ ဂဏန်းနှစ်လုံး အထိတောင် မရောက်ခဲ့ကြပါဘူး။
ဘွန်ဒက်လီဂါ မှာ ဆိုရင် ပင်နယ်တီ အများဆုံး ကန်သွင်းခွင့် ရတဲ့ အသင်းတွေ အဖြစ် ဝါဒါဘရီမင် ၊ မိုချန်ဂလာဘတ် ၊ ဖရိုင်းဘတ် ၊ ဘိုင်ယန် တို့က6ကြိမ် စီနဲ့ ပူးတွဲ ရပ်တည်သွားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ပင်နယ်တီ ပေးတာ အကြမ်းဆုံး နေရာ က စီးရီးအေ ပြိုင်ပွဲပါ။ 10 ကြိမ် နဲ့ အထက် ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းခွင့် ရတဲ့ အသင်းက6သင်းတောင် ရှိနေပြီး ၊ အသင်းအရေအတွက် အားလုံး ရဲ့ တစ်ဝက် နီးပါးဟာ ပင်နယ်တီ ကန်ခွင့်9ကြိမ် နဲ့ အထက်ထိ ရရှိထားပါတယ်။ စီးရီးအေ ရဲ့ လက်ရှိ ပင်နယ်တီ ရရှိမှု အနေအထား –
15 ကြိမ် – လာဇီယို
14 ကြိမ် – ဂျီနိုအာ
13 ကြိမ် – လက်ချီ
10 ကြိမ် – အင်တာ ၊ ဆမ်ဒိုးရီးယား ၊ ဂျူဗီ
9 ကြိမ် – ရိုးမား ၊ အတ္တလန္တာ ၊ ဖီအိုရင်တီးနား
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ကို ခြုံကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီရာသီ ဥရောပ ထိပ်သီးလိဂ်5ခုမှာ လာဇီယို က ပင်နယ်တီ အများဆုံး ရရှိထားတာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဂျီနိုအာ က ဒုတိယ နဲ့ ယူနိုက်တက် က တတိယ အများဆုံး ရရှိထားတာ တွေ့ရမှာပါ။
တိုက်စစ် ကစားပုံကို သိပ်ပြီး အသားမပေးတဲ့ အီတလီလို နေရာမျိုးမှာ ပင်နယ်တီ ပေးနှုန်း မြင့်တက်နေတဲ့ အချက်ကတော့ ဘောလုံးပွဲ အပေါ် ကြေးထပ်ပြီး ရင်ခုန်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် သတိထားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ခုလို့ပဲ ဆိုလိုက်ပါရစေ………..
ဒိုင်လူကြီး မိုက်ကယ်အိုလီဗာဟာ ဘုန်းမောက်ရဲ့ Man of the Match လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်လိုက်တဲ့ မော်ရင်ညို